Ezikhathini ezibucayi, yiba uMbungazi
Kunesidingo esiphuthumayo, esingakaze sibe khona sokuhlala kwezimo eziphuthumayo kwababaleki abafikayo bevela e-Afghanistan. Joyina i-Airbnb.org ekusizeni ababaleki base-Afghanistan.
Ukuvula amakhaya ngezikhathi zobunzima
Sisebenzisana nomphakathi wethu ukuze sinikele ngezindlu ezimweni eziphuthumayo, kusuka ezinhlekeleleni zemvelo kuya ku-COVID-19.
Funda kabanzi ngathi
Abantu abangu-75,000 bathole indawo yokuhlala ngezikhathi ezibucayi kusukela ngo-2012.
Emhlabeni jikelele, ababungazi be-Airbnb banikeza usizo uma ludingeka ngempela. Hlangana nabantu abenza lokhu kwenzeke.
Amandla Emvelo, Umphakathi kanye Nomusa
Indlela u-Carmen nomphakathi wakubo abahlangana ngayo ngemva kweSiphepho u-Maria.
Imiphakathi ethintwe yizinhlekelele
Sinikeza imiphakathi indlela yokubumbana lapho kugadla inhlekelele. Ngezinhlelo ze-Airbnb.org, abantu banganikela ngamakhaya abo mahhala komakhelwane abadinga ukuphuma ezindlini zabo.
Nangu u-Bob no-Juan
Ababaleki bathuthela kwelinye izwe
Ababaleki nalabo abafuna isivikelo babhekana nezinselele eziningi uma bethuthela kwelinye izwe. Ukuba nendawo yesikhashana yokuhlala, yamahhala, kubasiza babe nokuthula kwengqondo njengoba beqalisa ukuphila kwabo okusha.
Nangu u-Els no-Fode
Ukuvikela imiphakathi ku-COVID-19 nge-CORE
Funda indlela esisebenza ngayo nophathina abanjenge-CORE ukuze sisekele ukutholakala kwemithi yokugoma ngokungakhethi.
Hlangana no-Zack no-Crista
Izisebenzi zosizo ezinikeza usizo lwesikhathi eside
Kungathatha iminyaka ukuba umphakathi ululame ngokuphelele enhlekeleleni enkulu. I-Airbnb.org isiza ekukhokheleni izindawo zokuhlala zezisebenzi ezenza umsebenzi obucayi wokwakha kabusha imiphakathi.
Nali iqembu le-Mercy Corps
Ukwakha umhlaba ogxile ekuvikelekeni: izibophezelo ze-Airbnb.org
Namhlanje, ukuze kwakhelwe eminyakeni engu-8 yokufunda nolwazi, simemezela uchungechunge lokuzibophezela ekungabandlululini, ukungahlukani nokulingana.
Sisiza ezinye izinhlangano ezingenzi inzuzo ukuze zibe negalelo eliqhubekayo.
Hlangana nophathina abambalwa abasiza ekuklameni i-Airbnb.org.
I-International Medical Corps
I-IMC inikeza amasevisi ezimo eziphuthumayo ezokwelashwa nahlobene nako kulabo abathintwe izinhlekelele emhlabeni wonke, futhi inikeza abantu ukuqeqeshwa abakudingayo ukuze basuke esimweni sokusizwa bese bekwazi ukuziphilisa.
I-International Rescue Committee
I-IRC isabela ezinhlekeleleni ezimbi kunazo zonke emhlabeni ezithinta abantu, futhi isiza abantu abaye bonakalelwa ukuphila nezindlela zokuziphilisa ngenxa yezimpi nezinhlekelele ukuba baphile, baqale ukuphila kabusha, futhi bazakhele ikusasa.
I-HIAS yinhlangano engenzi inzuzo yamaJuda emhlabeni wonke enikeza isivikelo nosizo kubabaleki, labo abafuna ukuvikelwa, nolunye uquqaba olungasenazindawo zokuhlala emhlabeni wonke.
I-Build Change iyinhlangano yokuvimbela inhlekelele nokusiza lapho ivelile esungula izixazululo eziphumelelayo zezindawo zokuhlala emiphakathini.
I-CORE iyahola ekulungeleni izinhlekelele, ukusabela, nemizamo yokusiza yemiphakathi ethintwe yinhlekelele noma echayeke kuyo.
I-International Federation of Red Cross ne-Red Crescent Societies
I-IFRC iyinethiwekhi yezenhlalakahle enkulu kunazo zonke emhlabeni, ehlanganisa i-192 National Red Cross kanye ne-Red Crescent Societies esebenzela ukusindisa ukuphila futhi ithuthukise isithunzi emhlabeni jikelele.
Sindawonye, singakha kabusha.
Ngo-August 2018, uchungechunge lokuzamazama komhlaba lwacekela phansi isiqhingi sase-Indonesia i-Lombok. Izisebenzi ezisizayo ze-Mercy Corps zathunyelelwa ukuyokwenza umsebenzi wokusiza kuleyo ndawo, futhi zathola umphakathi nendawo yokuhlala ekahle.
Ngezikhathi zobunzima, umnikelo wakho usiza abantu bathole indawo abangayibiza ngokuthi yikhaya.
Joyina ababungazi abangaphezu kuka-100,000 futhi unikeze abantu indawo yokuhlala mahhala ngesikhathi abayidinga ngaso kakhulu.
Vula ikhaya lakho
Bungaza indawo yokuhlala
Nikelela izindawo zokuhlala
© 2021 Airbnb.org. Wonke amalungelo agodliwe